ब्लग - साप्ताहिक
बिहान सखारैको चिसो मौसममा आकाश खुलेर चारैतिर सफा देखिन्थ्यो । मुटु रेट्ने सिरेटोले लर्बराएका सेताम्मे मनमोहक बोटबिरुवाहरूले मेरो बालसुलभ मन लोभ्याउँथ्यो । माघ–फागुनको आसपास भएकाले खेतबारीका बालीनाली भित्र्याइसकेर नजिकै आइरहेको ल्होसारको तयारीमा व्यस्त देखिन्थे सबै । पुरा पढ्नुहोस्
वीरमा काम गरेको केही वर्षपछि हामी दुवैजनाले एडी पढ्न विदेश जाने अवसर प्राप्त गर्‍यौं । म भारतको एम्स पुगे भने उहाँ बेलायत जानुभयो । म एम्सको पढाइ सकेर पुन: अस्ट्रेलिया गए । उहाँ बेलायतमै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मभन्दा केही समयअघि बेलायतबाट आएर पुन: वीर अस्पतालमा सेवा गर्न थाल्नुभयो । म सन् १९९६ मा फर्किए । पुरा पढ्नुहोस्
विगत पाँच वर्षको अवधिमा म जहाँ–जहाँ पुगें, त्यहाँ विदेशी नागरिकहरूसामु नेपालको सुन्दरताका बारेमा बयान गर्दै घुम्नका लागि प्रस्ताव गरेको छु । कतिपय विदेशी प्रभावित भएर नेपाल घुम्न पनि निस्किएका छन् । म जहाँ बास बस्छु, त्यो ठाउँमा सयौं ट्रक र ट्रक ड्राइभर झुम्मिन्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
डा. रवीन्द्र समीर, वैशाख ३१, २०७५
हामीहरू तपाईंको दीर्घजीवनका लागि मुटुभित्र दीयो बालेर प्रार्थना गरिरहेका छौं । डा. देवकोटा ! उठ्नुहोस्, हिँड्नुहोस् अनि विज्ञानभन्दा पर रहेको ज्ञानमा आफूलाई समर्पित गर्नुहोस् । जहाँ विश्वासले धोका दिन्छ त्यहाँ अन्धविश्वासले साथ दिन्छ । प्रेमको उत्कर्ष अन्धो प्रेम भएझैं विश्वासको उत्कर्ष अन्धविश्वास हो ।पुरा पढ्नुहोस्
नोभेम्बर २१ मा बेलायत पुगी जनवरी २५ मा मात्र किमोको पहिलो डोज लिन पाएँ । सबै कुरा ढिलो हुन पुग्यो । किमोपछि ल्युकोपोनिया र कलेन्जाइटिससँग जुध्दै रहेँ । लड्दै–पड्दै तीन साइकल किमो लिन पाएँ, तर मेरो ट्युमर बढ्दै गएको देखियो । आफ्नो उपचारले रेस्पोन्ड नगरेकोमा पाल अलि निराश देखिए ।पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन २२, २०७४
महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी बाँच्छन् ? यसको सबैभन्दा मुख्य कारण महिलाहरू आफ्नो जीवनभर नाता सम्बन्धलाई उच्च स्थानमा राख्छन् र यही नाता सम्बन्धलाई कायम राख्न हरेक पल प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । अध्ययनअनुसार यही आत्मीयताले एउटा जैविक शक्ति उत्पादन गर्छ, जसले रोगहरूसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ ।पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन २१, २०७४
एैंसेलुखर्क जाने भा’ पर्खम नआई नफर्क...धनकुटा हिले दिल चित्त मिलेजाउँm हिंड यो वर्ष ।पुरा पढ्नुहोस्
शारीरिक आकर्षबाट सुरु भएको युवायुवतीको सम्बन्ध कुन होटल, पार्क वा कोठामा पुगेर टुङ्गिन्छ पत्तै हुँदैन । हिजोआजको सम्बन्ध प्रेममा कम वासना र स्वार्थमा धेरै टिकेको छ । अहिले हरेक चिज केवल यौनमा जोडिन थालेको छ । विश्वासमा कम, यौन र आकर्षणमा ज्यादा टिकेका वा बनेका सम्बन्धमा कुन बेला कहाँ अविश्वास पैदा भएर टुट्छ थाहा हुँदैन ।पुरा पढ्नुहोस्
अमेरिका पस्दाखेरीका दु:खका ति दिन सम्झिँदा अहिल्यै नेपाल फर्किहालौं कि लाग्थ्यो । रहरले गरेको सानोतिनो कामले पनि सन्तुष्टि दिदो रहेछ, तर बाध्यता परेर सानो काम गर्नुपर्दा त आँखाबाट आँसु नै आउँथ्यो । तर पनि पाइला चाल्न छाडिएन । पछि हटिएन । एकपटक पाइला चालेपछि रोकिनेछैन । मैले संघर्ष जारी राखें ।पुरा पढ्नुहोस्
डा.तोसीमा कार्की, वैशाख ३०, २०७४
किनकी म चाहन्छु, जसले जिते पनि 'म' हरुको सपनाले नहारोस्, जसले हारे पनि पनि मेरो राजधानीले नहारोस् । मेरो देशले नहारोस् । पुरा पढ्नुहोस्
प्रेमलाई कस्समले बाँधेर तोड्नु भन्दा कस्सम नखाएकै जाती हुन्छ । आफूले माया गर्ने मान्छे फूल जस्तै हुँदा आफ्नो मन पनि पुतली जस्तै भैदिन्छ । जतिबेला पनि उसैको वरीपरी डुलिरहुँ जस्तो । लाग्छ प्रेम भनेको सदैव जिवन्त हुनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्